Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguAlbert
Isikhululo seenqwelomoya sase-Albert saseZagreb sikwi-3.4 km ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseFranjo Tuđman. Indlu yayihonjiswe ekuqaleni kuka-Agasti ka-2019, ingaphakathi langoku kwaye ixhotyiswe ngayo yonke into oyifunayo ukuze uhlale kamnandi. Ilungele izibini, amaqela abahlobo kunye neentsapho ukuya kumalungu ama-4. Sikunqwenelela ukuhlala okumnandi!
Indawo yokuhlala inendawo eyi-42 m2. Iqukethe igumbi lokuhlambela elixhotyiswe ngeshawa, ikhitshi exhotyiswe nge-ceramic hob, i-microwave, ifriji, itafile yokutya kunye ne-cutlery kunye nezixhobo zokupheka. I-TV enezihlalo ezibini kunye ne-flat-screen TV ibekwe ekhitshini / kwigumbi lokutyela. Indlu inamagumbi amabini okulala; enye inebhedi ezimbini zomntu omnye kwaye enye ibhedi ephindwe kabini (160 x 200). App. ikwaxhotyiswe nge-air conditioning kunye ne-gas central heat kunye ne-Wi-Fi. Indawo yokupaka yabucala, egqunyiweyo, iphambi kwesakhiwo. Ezinye izibonelelo: iitawuli, isepha, ilinen yokulala, iphepha langasese, amanzi ashushu, iincwadi zabantwana kunye nezinto zokudlala, i-oyile, ityuwa, ipepile, izitya, izinto zokucheba, ii-hangers, isomisi seenwele, iingubo, ishampu.
4.97 · Izimvo eziyi-62
Indawo ezolileyo nenoxolo apho yonke into isesandleni sakho. I-Lidl 70m kude, isikhululo segesi - 100m, Kaufland - 150m, isikhululo sebhasi sokufika eVelika Gorica kunye nokusuka eVelika Gorica - 50m (imigca ye-268 kunye ne-290).
Ndiyavuya ukunika indawo iindwendwe, ukuze ziphumle kakuhle! Ukuba bafuna into ethile, njengolwazi malunga nenethiwekhi ye-Wi-Fi, imiyalelo yesixeko (yeyiphi indawo yokutyela okanye i-cafe ilungile), ndiya kukuvuyela ukuthetha nabo kwaye ndichaze yonke into kubo !!!
Ndiyavuya ukunika indawo iindwendwe, ukuze ziphumle kakuhle! Ukuba bafuna into ethile, njengolwazi malunga nenethiwekhi ye-Wi-Fi, imiyalelo yesixeko (yeyiphi indawo yokutyela okany…